Tube Extruder Machine Factory - China tube Extruder Machine Manufacturers, Suppliers
Corrugated Pipe Machine Atụmatụ: 380V, 1.5KW, Frequency Control, Maka mmepụta nke mpụta dayameta nke OD nke 10mm ka 50mm, Wallthickness 1-2MM PTFE convoluted sooks. PTFE convoluted sose igwe adopts dị hita, kpo oku okpomọkụ nwere ike ịbụ kpomkwem + -1 ogo, a mmadụ canoperate abụọ igwe, bụrụ 16/18 PTFE convoluted sooks hour obula ikike nke 15-35 mita.
vetikal ụdị Polymer PTFE tube Ram Extruder Machine PFG500 Dia 300mm-500mm
Njirimara nke tube Ram Extruder PFG500 Site na-aga n'ihu mma, na akụrụngwa bụ echeta, ọzọ mụ na ịrụ ọrụ nke ọma. Ngwongwo a na-ejikwa usoro PLC na-ejikwa ya rụọ ọrụ akpaghị aka. Na iche iche imewe, na akụrụngwa nwere ike izute dị iche iche mkpa nke ọrụ, na-ahaziri maka ndị ahịa. Akụrụngwa ahụ na-agba ọsọ ogologo oge, yana obere mkpọtụ. Ma belata ụgwọ site na ịchekwa ike na ume n'oge nrụgide nrụgide. A na-eme akụrụngwa na ebu.